ऊर्जा विकास : समृद्धिको आधारशिला
सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने प्रमुख आधारशिला ऊर्जा हो । ऊर्जा विकास समग्र विकासको पूर्वशर्त पनि हो । नेपाल सरकारले हालै सार्वजिनक गरेको बजेट र ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा वि.सं. २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशकका रुपमा मनाउने गरी विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । सर्वसाधारण नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नेपाली डायस्पोराको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । त्यसैगरी निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण नीतिमा आधारित रहेर आयोजनाको विकास गरिनेछ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घरपरिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था घोषित बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी विद्युत् महसुल निर्धारण र पुनरवलोकन, विद्युत् खरिद सम्झौतालगायत समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि विद्युत् नियमन आयोगको गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । देशभर स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिनुका साथै वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एबं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रुपमा विकास गरिने भएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु मानिएको यो नवनिर्मित बजेटले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका उदियमान र चम्किला नक्षेत्र कुलमान घिसिङ एउटा विवेकशील र नतिजापरक कार्यसम्पादनको अनुपम उदाहरण हुनुहुन्छ । प्रत्येक नेपालीहरुको आँखाका नानी बनेका घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा प्राप्त गरेपछि लोडसेडिङमा क्रमशः गिरावट आई अन्ततः निमिट्यान्न भएको छ । वि.सं. २०७३ को लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ, २०७३ चैत १ गतेदेखि देशभरको ग्राहस्थ्य लोडसेडिङ र २०७५ वैशाख ३१ देखि देश भरको औद्योगिक लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अब मुलुक पूर्णरुपमा लोडसेडिङमुक्त भएको छ । प्रायः घाटामा गइरहने विद्युत् प्राधिकरण यस वर्ष गत आवको तुलनामा एक सय १७ प्रतिशतले खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यसैले त कार्यकारी निर्देशकज्यूले यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट इन्जिनियर र सर्वोत्कृष्ट सिईओको पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नु भएको छ । ऊर्जाशील कार्यकारी निर्देशकको विश्लेषणात्मक अनि कामयावी क्रियाकलापले मुलुकका विविध क्षेत्रका नेतृत्व र प्रतिभाहरुलाई एक किसिमले जुरुक जुरुक बनाएको छ । असम्भाव्य क्रियाकलापहरुको माझमा सम्भावनाको बिजारोपण गरेको छ । सफलता दृढ इच्छाशक्ति, अनवरत प्रयास, सकारात्मक दृष्टिकोणमा निर्भर हुने सन्देश प्राप्त भएको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र गतिशील नेतृत्व र ऊर्जाशील कर्मचारीहरुको सामर्थ्यबाट समृद्धिको दिशामा गतिमान भएको छ ।
हालै प्रकाशित आर्थिक सर्भेक्षण २०७४/७५ अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा विद्युत् उत्पादन सात दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १०४४ दशमलव छ प्रतिशत मेगावाट पुगेको छ । ८३००० मेगावाटको सम्भाव्य क्षमता भनिएको नेपालमा बल्ल एक सय सात वर्षपछि विद्युत् उत्पादनले एक हजार मेगावाट नाघेको छ । त्यसैगरी विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या ३५ लाख ९२ हजार पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निजी प्रवद्र्धकबाट ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ३२ दशमलव छ प्रतिशत मेगावाट गरी जम्मा ७२ दशमलव एक प्रतिशत मेगावाट जलविद्युत् थप उत्पादन भई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु बाट कूल सात सय १० मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । उक्त पाँच आयोजनाहरुमा कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली ३ए (६० मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट) र तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) रहेका छन् । जसमध्ये कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आ. २०७५/७६ मा नै सम्पन्न हुनेछन् । वर्षेनी बढ्दो विद्युत् माग सँगसँगै मुलुकको आयातीत ऊर्जालाई यी दुई आयोजनाले विस्थापित गर्ने अपेक्षा यत्रतत्र सर्वत्र गरिएको छ । तत्पश्चात् मुलुकबाट ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने दर्बिलो आधारशिला तयार हुनेछ । सर्भेक्षणअनुसार हाल कुल ऊर्जा खपत अनुपात परम्परागत ऊर्जाबाट ६८ दशमलव नौ प्रतिशत, व्यापारिक ऊर्जाबाट २७दशमलव नौ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाबाट पाँच दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट समग्रमा दुई सात प्रतिशतले घटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हालसम्मको हाम्रो विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता झण्डै १०४४ मेगावाट रहेको छ । यो जलस्रोतको दृष्टिले कुल सम्भाव्य क्षमताको एक दशमलव २५ प्रतिशत मात्र हो । साथै ११ नगरपालिका र एक सय तीन गाउँपालिकामा आजसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत विद्युत्को पहुँच पु-याउन सकिएको छैन । २५ प्रतिशत जनता अझै विद्युत्को ओझेलमा परेका छन् ।
.विद्युत एउटा त्यस्तो संवेदनशील सेवा हो जसलाई समग्र विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ । भान्सा प्रशासनदेखि विश्व प्रशासनसम्म हर क्षेत्रमा ऊर्जाको सम्भावना र उपयोग बढेर गएकोे छ । प्रकाश शक्ति, ताप शक्ति, चिस्यान शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, उपकरण र प्रविधि सञ्चालन शक्तिलगायतका शक्तिहरु यसै सेवामार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारसँग भएको सार्वजनिकता र वैधानिकता अनि निजी क्षेत्रसँग भएको प्रविधि र व्यावसायिकताको उचित संयोजन र सहकार्यबाट विद्युत् विकास सम्भव छ । विगतका सदन, सरकार र सम्झौताहरुको अकर्मण्यताले गर्दा विद्युत् उत्पादन र वितरणमा अभूतपूर्व अभावको लामो शृङ्खलासँगै ऊर्जा सङ्कटको असाधारण परिस्थिति व्यहोर्नुप-यो । अहिले पनि नेपाल पेट्रोलियम इन्धनमा अत्यधिक परनिर्भर छ । यहाँ भारतीय नाकाबन्दीले आक्रान्त बनाउँदा सर्वसाधारणको साँझ बिहान चुल्हो बल्न पनि हम्मे हम्मे प¥यो । त्यसको भरपर्दो विकल्प जलविद्युत र सौर्यऊर्जा नै हो । तर त्यो हामी अझै बुझ्न सकिरहेका छ्रैनौं । सौर्य ऊर्जाका लागि प्रशस्त पुँजी आवश्यक पर्दछ । सर्वसाधारणका लागि त यो आकासको फल जस्तै हुन्छ । मुलुकमा प्रशस्त जल उपहार छ, त्यो यसै खेर गइरहेको छ । पानी पेट्रोलियम झैं किन्न पर्दैन । त्यसलाई उर्जा शक्तिमा बदल्न सके मुलुक यसैबाट कायापलट हुन सक्छ । साथै विद्युत् निर्यातबाट प्रशस्त ह्वाइट डलर आर्जन गरि शोधनान्तर स्थिति पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् निर्यातबाट नै नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, डाइनामाइट बन्न सक्छ । त्यो सम्बद्ध पक्षले बुझ्नै पर्ने हुन्छ । भोटको राजनीति सत्ताको मोह, कमिसनको चक्कर, द्वन्द्व, बन्द र हडताल जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले विद्युत् क्षेत्र लामो समयसम्म नतमस्तक बन्न पुग्यो । तर, अब त्यस्ता गतिविधि दाहोरिनु हुँदैन । विगतमा भन्ने गरिएको राजनैतिक अस्थिरता विद्युत् विकासको बाधक हो भन्ने कुरा पनि अब समाप्त भएको छ । सारभूतरुपमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारशिला जलविद्युत् नै भएकोले अब सरकारको अर्जुनदृष्टि यसै क्षेत्रमा केन्द्रित रहन आवश्यक छ । सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिबद्धता र अभ्यास अनिवार्य छ । (आर्थिक दैनिकबाट)